Trump oo diiday guusha la saadaaliyay ee Biden, oo yidhi ‘doorashada meel fog ayaa ka dambaysa’ | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Trump oo diiday guusha la saadaaliyay ee Biden, oo yidhi ‘doorashada meel...
Trump oo diiday guusha la saadaaliyay ee Biden, oo yidhi ‘doorashada meel fog ayaa ka dambaysa’
Madaxweynaha xilka haya Donald Trump ma ogolaanayo doorashada wuxuuna balan qaaday in dacwado uu ka qaadan doono dhowr gobol.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in Biden loo saadaalinayo inuu helo codadka 290 College College si uu uga gudbo marinka looga baahan yahay inuu ku guuleysto Aqalka Cad
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii adkeystay sabtidii, isagoo diiday guushii la saadaaliyay ee doorashada ee loolankiisa Dimoqraadiga Joe Biden wuxuuna wacad ku maray in “doorashadu ay ka fogtahay wax ka badan sida
Sidee ayuu Joe Biden ugu helay 270 cod Kulliyadda Codbixinta Mareykanka
Doorashooyinka Mareykanka: Sidee Biden u rogay goobta dagaalka cododka la dhibaanayey Pennsylvania
Warbaahinta waxay u dagaallamayaan caddeynta iyadoo ay jirto jahwareerka doorashada Mareykanka
Bayaan uu soo saaray isla markii lagu dhawaaqay ka dib, Trump wuxuu ku eedeeyay Biden inuu “ku deg degay inuu si been abuur ah u muujiyo inuu yahay guuleystaha” doorashadii adkayd ee loo tartamay, taas oo ay ka muuqdeen dadka u soo baxay diiwaan galinta isla markaana ahayd mid ka mid ah khilaafaadyadii ugu dambeeyay ee la xasuusto.
“Xaqiiqda ayaa ah in doorashadan ay tahay mid aan wali dhamaan,” ayuu yiri Trump.
“Joe Biden looma siinin wax shahaado ah inuu ku guuleystey gobol kasta, iskaba daa mid ka mid ah gobolada sida aadka ah loogu loolamayo ee ku wajahan dib u tirinta khasabka ah, ama gobolada ay ololaheena ay ku leeyihiin caqabado sharci i ah oo go’aamin kara guusha ugu dambeysa.”
Ololaha Donald Trump ayaa dacwado ka gudbiyay gobollo dhowr ah oo aan weli la dhameystirin tirinta codadka
Tan iyo Maalintii Doorashada, Trump wuxuu si been ah u sheegtey in ka badan hal jeer inuu ku guuleystey doorashada, inkasta oo tirinta codadka ay ka socoto dhowr gobol oo muhiim ah, oo ay ku jiraan Pennsylvania, Nevada, Georgia iyo Arizona.
Wuxuu sidoo kale dhowr jeer ku celceliyay sheegashooyin aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsan musuqmaasuqa baahsan ee cod-bixiyaha – eedeyn ay diideen saraakiisha doorashada i u sheegeen yo sidoo kale khubarada sharciga.
Ololaha hogaamiyaha Jamhuuriga ayaa dacwado ka gudbiyay dhowr gobol. Qaar ka mid ah kiisaskaas horey ayey u diideen maxkamadaha, laakiin qoraalka Trump ayaa lagu sheegay in dacwada ay sii socon doonto Isniinta.
“Laga bilaabo Isniinta, ololahayagu wuxuu bilaabi doonaa in dacwadeena laga dacweeyo maxkamada si loo hubiyo in sharciyada doorashada si buuxda loo adkeeyo oo qofka saxda ah ee guuleysta la fariisto,” ayuu yiri.
Trump wuxuu ballanqaadayaa dagaal
Dhanka kale ah ,
Biden ayaa Sabtidii sheegay in uu “sharaf iyo sharaf lihi” in lagu dhawaaqo inuu ku guuleysto tartanka.
Madaxweyne kuxigeenkii hore ee Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri “Waxaan ku aaminay kalsoonida dadka Mareykanku ay siiyeen aniga iyo ku xigeenka la doortay [Kamala] Harris.”
Wuxuu sidoo kale ku celceliyay wicitaan uu usbuuca oo dhan u qabtay midnimo iyo bogsiin. “Markii ololuhu dhammaaday, waxaa la joogaa waqtigii carada iyo hadallada xanafta leh gadaasheenna oo la isugu imaan lahaa qaran ahaan,” ayuu yiri.
Haddii saadaalinta AP ee guusha Biden la caddeeyo, tani waxay noqoneysaa markii afaraad ee taariikhda dalka ee madaxweyne xilka haya looga adkaado tartame.
Garyaqaanka gaarka ah ee Trump Rudy Giuliani, duqii hore ee magaalada New York, ayaa sabtidii ku maadeystay saadaasha Biden madaxweynaha la doortay.
“Yuu sheegayaa?” Giuliani wuxuu weydiiyay koox weriyeyaal ah, oo isugu soo baxay meel ka baxsan Philadelphia si loogu dhawaaqo dadaalka dacwadda ololaha Trump. Markii loo sheegay in shabakadaha telefishanka ee Mareykanka ay sameeyeen wicitaanka, Giuliani wuxuu ku qayliyey: “Shabakadaha oo dhan! Dhamaan waa Xag Jir
“Ha noqon mid lagu qoslo, shabakadaha ma helaan go’aan ka gaarista doorashooyinka. Maxkamaduhu way qabtaan, ”ayuu yidhi.
Horraantii usbuucan, maareeyaha ololaha Trump Bill Stepien ayaa isna ballanqaaday inuu “sii wadi doono dagaalka uu ugu jiro doorashadan maxaa yeelay taasi waa waxa ay mudan yihiin dadka Mareykanku”.
Previous articleFaahfaahin: Senator lala beegsaday qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho
Next articleMadasha Xisbiyada Qaranka oo ka hor timid Gudiga Dowlada ku dhawaaqday dhan Doorashada
Trump needs Florida, Biden has more options. We walk you through states the candidates need to win to capture the presidency. A man watches election...